DAAWO VIDEO:Amaanka Muqdisho oo Wax laga Badaley War Laga Soo saaray Goordhow
April 15, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 1
maamulka Gobolka Banaadir Iyo Amniga Soomaaliya Ayaa war kasoo saaray Amaanka Magaalada Muqdisho oo baryahani Xaaladeeda Laga Darinayey,Waxana Laga Soo saaray Dhowr Qodob oo wax Looga Badalayo.
Yagleeliddii hannaanka federaaliga ee dalkeena ayay waxyaabo dhowr ah oo aasaasi ahi ay ka qaldameen oo waxaa kas iyo maag u dhabqiyay Xassan Shiikh iyo xulufadiisii masuuliyaddeeda xambaarsanaa. In ay qabyadu sii jirto ayay na ku talo galeen si hadhaw kuwa ka dambeyn doona loogu dhaliilo oo looga dhigto qiilkii Villa Muqdisho dib loogu hanan lahaa.
Arrimahaas ogaalka loo qabyadeeyay waxaa ku jira dastuurka qaran, in Banaadir iyo inta hoos timaadda maamul goboleed loogu dhiso, malmalluuqii Galmudug iyo habka loo soo dhisi lahaa ciidamada qaran ee federaalka. Marka aan arrinka ciidamada ee uu cinwaanka kore khuseeyo hadalkayga ku soo koobo, waxaa uu waajibka aasaasiga ahi ahaa in marka hore maamul goboleed kasta ciidamadiisa qalabka qumaati loogu taago oo deeto iyaga laga soo xulo ciidan heer qaran ah ee isku dhaffan.
Ciidankaas isku dhaffka ahi ka ma suurowdeen in la musuqmaasuqiyo oo ay caasimaddu qalalaasahan ku waarto. Iminka maleeshiyo beeleedyo wada mooryaansan ayaa inta Koonfurtaas laga soo tuuteeyay ciidan qaran lagu sheegayaa, kuwaas oo ay jeebabka ku sitaan siyaasiyiin dawladda ka tirsan oo ajeendooyin qaran dummis ah ku fushanaya oo ka sii daran ee cawaannimadoodaas dow iyo ilbaxnimo u haysta.